Moa RFID Teknolojia Secure sy Private?
ny mpitantana ny 18-08-21
Indrisy, tsy dia matetika ao amin'ny rafitra izay mpanjifa dia mety hita miharihary. Na iza na iza araka ny tokony ho ampy fitaovana miaraka amin'ny scanner sy ny akaiky fahafahana hahazo ny fitaovana RFID Afaka mampihetsika azy io ary vakio ny ao anatiny. Mazava ho azy, misy olana dia lehibe noho ny hafa. Raha misy mandeha amin'ny alalan'ny kitapo ny boky ...
Ahoana no RFID Works
Inona no atao hoe RFID?
RFID mijoro ho an'ny Radio-Frequency famantarana. Ny fanafohezan-teny dia manondro ny fitaovana elektronika kely izay ahitana ny kely sy ny Antenna Chip. Ny Chip matetika dia afaka mitondra 2.000 oktety ny tahirin-kevitra na latsaka. Ny fitaovana RFID manompo ny tanjona mitovy ho toy ny bara fehezan-dalàna na andriamby esory ao ambadika ...